Tetiandro litorjikan'ny Fiangonana ortodoksa atsinanana - Wikipedia
Tetiandro litorjikan'ny Fiangonana ortodoksa atsinanana
Fitanjozorana amin'ny andro Paska any Rosia, nataon'i Illarion Prianichnikov tamin'ny taona 1893.
Ny tetiandro litorjikan'ny Fiangonana ôrtôdôksa atsinanana dia miavaka noho ny fisian’ ny fifandimbiasan’ ny fifadian-kanina sy ny fety, ary mitovitovy amin’ ny lafiny sasany amin’ ny an’ ny Katolika rômana izany. Ny taom-baovaon’ ny Fiangonana anefa, raha araka ny fanao taloha, dia manomboka amin’ ny 01 Septambra, fa tsy amin’ ny Alahady voalohan’ ny Advento.
Ahitana fety roa manaraka tsingerijna raikitra sy tsingerina paskaly (na miova) amin'izany. Ny fety lehibe indrindra dia ny fetin’ny Paska (Paskha). Manaraka ny fety lehibe roa ambin’ny folo, izay ahatsiarovana ny zava-nitranga miavaka indrindra teo amin’ny fiainan’i Jesoa Kristy sy ny Renin'Andriamanitra (Theotokos: Masina Maria).
Ny ankamaroan’ny Kristiana ortodoksa (ny Rosiana indrindra) dia manaraka ny tetiandro joliana raha mikajy ny datin’ny fetim-piangonana, nefa maro (isan’izany ny Patriarkata Ekiomenika sy ny Fiangonan’i Gresy) no nandray ny fomba fikajiana araka ny tetiandro joliana nahitsy (izay mifanandrify ankehitriny amin’ny tetiandro gregoriana) mba hikajiany ireo fety miovaova daty arakaraka ny datin’io tetiandro io.
Eo anelanelan’ny taona 1900 sy 2100 dia misy elanelany 30 andro amin’ny datin’ny tetiandro joliana sy ny tetiandro joliana nahitsy na ny tetiandro gregoriana. Raha ohatra ka ankalazaina amin’ny 25 Desambra ny Noely araka ny fanao tranainy dia mifanandrify amin’ny 7 Janoary amin’ny tetiandro joliana nasiam-panitsiana izany. Ny fikajiana ny datin’ny Paska anefa dia araka ny tetiandro manara-bolana miorina amin’ny tetiandro joliana, na dia ho an’ireo fiangonana manaraka ny tetiandro joliana nasiam-panitsiana aza.
Ny fifadian-kaninan’ny fahaterahan’ny Mpamonjy (Karemy ririnina) dia fotoana fanomanana ny fetin’ny Fahaterahan’i Kristy (Noely), nefa raha maharitra 40 herinandro ny Advento (na Fiandrasana) any Andrefana, ny Fahaterahana kosa maharitra fifadian-kanina 40 andro.
Ny fifadian-kanin’ny Torimason’i Maria (latina: dormitio) maharitra roa herinandro, hatramin’ny 01 ka hatramin’ny 14 Aogositra, ao anatin’ny fanomanana ny fetin’ny Torimason’ny Theotokos (15 Aogositra).
Ny taom-piangonana dia voarafitra mba hahatonga ireo fety lehibe ireo hankalazaina mandritra ny fizaran-taom-pifadian-kanina tsirairay, ka hahatonga ny fifadian-kanina hifandimby amin’ny andro fifaliana.
Ny fety lehibe indrindra dia ny Pascha (Paska). Ny Paska ho an’ny Atsinanana sy ny Andrefana dia kendrena ho ny Alahady voalohany aorian’ny fenomanana mifanandrify amin’ny 21 Marsa na aorian’io daty io (izany hoe ny andron’ny fitoviam-paharetan’ny andro sy ny alina, atao hoe ekinoksa vernaly), nefa ny kajin’ny Ortodoksa dia aoriny amin’ny tetiandro joliana ka ny 21 Marsa dia mifanadrify amin'ny 3 Avrily amin'ny tetiandro gregoriana, sy amin’ny kajin’ny datin’ny fenomanana hafa noho ny fanao amin’ny any Andrefana.
Ireo fety lehibe roa ambin’ny folo[hanova | hanova ny fango]
Ny sasany amin’ireo fety ireo dia manaraka tsingerina raikitra fa ny sasany manaraka tsingerina miova daty (paskaly). Ny ankamaroan’ireo manaraka tsingerina raikitra dia manana fari-potoana fanomanana atao hoe fety mialoha, avy eo ny fari-potoana fankalazana mitovitovy amin’ny Valo andro (latina: Octava) any Andrefana, atao hoe fety famaranana. Ny fety lehibe ao amin’ny tsingerina paskaly dia tsy misy fety mialoha. Ny faharetan’ny fety mialoha sy ny fety famaranana dia miovaova arakaraka ny fety antom-pisiany. Ireto avy ireo fety lehibe ireo:
ny Fidirana ao Jerosalema (Alahady alohan’ny Paskha): fantatra any Andrefana amin’ny anarana hoe Alahadin'ny Sampan-kazo;
ny Fiovan-tarehin’ny Tompontsika (6 Aogositra): fiovan-tarehin’i Kristy araka izay ijoron’i Piera sy i Jakobaary i Joany vavolombelona;
ny Fetin’i Md Hierarka: i Bazily Lehibe, i Gregorio Teolojiana ary i Joany Krizostoma (30 Janoary);
ny Fetin’ireo Md Emperorea Konstantino sy Mb Helena (21 Mey);
ny Fetin’i Md Piera sy Md Paoly;
Ny tsingerina hafa[hanova | hanova ny fango]
Tetiandro litorjikan'ny Fiangonana katolika siro-malabara
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tetiandro_litorjikan%27ny_Fiangonana_ortodoksa_atsinanana&oldid=1014519"
Voaova farany tamin'ny 11 Aogositra 2021 amin'ny 10:21 ity pejy ity.